Iindaba -USHEHWA WABONISA IPHAKATHI LESISOMBULULO KWI-BEIFANG QuARRY
U-SHEHWA, umenzi womatshini wokugrumba, ngendlela efanayo yokubonelela ngeemveliso zomatshini ezipheleleyo kubathengi, usebenzisa iminyaka engaphezu kwama-20 yamava oshishino ukubonelela ngezisombululo ezinokuthenjwa kubasebenzisi boomatshini bokugrumba abaphantsi kunye nokunceda inkonzo yabathengi ukufezekisa iinjongo zobunjineli kunye Ixabiso eliphantsi kunye nokusebenza okuphezulu. Kuxeliwe ukuba intsebenziswano phakathi komenzi we-Xuanhua wokugrumba i-SHEHWA kunye ne-BEIFANG enkwalini ayiphelelanga ekunikezelweni kwezixhobo. Inkwali ye-BEIFANG ayifuni ukutyala imali eninzi, eyagcina iindleko zemveliso kunye nokunciphisa umngcipheko wokufaka. I-SHEHWA yokugrumba isixhobo inokuziqonda ngcono iimfuno zekwari ye-BEIFANG kwaye inike izisombululo ezibalulekileyo kuphuhliso lwayo lwexesha elizayo.
U-SHEHWA ubonelela ngetekhnoloji yokugrumba kwi-BEIFANG Quarry, ebekwe kwisixeko saseChaoyang, kwiphondo laseLiaoning, ukuyinceda ukuphucula ukusebenza kakuhle.
I-tuff efumaneka kwikwari ye-BEIFANG lelona zinga liphezulu lentlabathi yesanti.Iziko lalo mgodi liceba ukwenza imigodi emalunga nezigidi ezi-3 zeekyubhi zamatye apha minyaka le.
Singacinga ukuba xa sombela umngxunya ngobunzulu be-22m kunye nobubanzi be-115mm ngesando, kuyakubakho ukutyekela okucacileyo kwaye ukusebenza kokomba kuya kuncipha. umatshini oveliswe nguSHEHWA. Ingasebenza kunye noxinzelelo oluphezulu lokungenisa emanzini, kwaye uxinzelelo olusebenzayo lufikelela kwi-21bar.
Ubulukhuni belitye bubunzima obuphakathi F = 8-10. Emva kovavanyo oluphindiweyo enkwalini, kuye kwagqitywa ekubeni kwamkelwe inkqubo yokuthambeka komngxuma nge-140mm kunye ne-Angle yeedigri ezingama-30 ukusuka kwicala elime nkqo. Ngale ndlela, uzinzo lwenyathelo lungangcono, umgca wokumelana unokuba ngokufanayo, kwaye ipesenti enkulu kunye nentsalela inokuncitshiswa.
I-X5A-DTH eveliswe ngu-Taiye, umenzi we-rig wokurhola e-Xuanhua, usetyenziselwa ukuphucula ukusebenza kakuhle.I-BEIFANG ikhethe le drill kuba inokulawula ngokuchanekileyo i-Angle yokomba, ukucoca umngxunya kunye nokugudisa udonga lomngxunya, ukubhola umngxunya onzulu kunye nokumba ngokukhawuleza.
Inkwali ye-BEIFANG ibeka phambili iimfuno ezizodwa zokulungiselela imveliso. Sisoloko sisithi, "ngcono umgangatho wokwakheka kwemingxunya, ngcono ukuqhushumba, kwaye kunjalo, iziphumo zibhetele. Ngamanye amagama, ukunciphisa inani lokuqhushumba kwesibini kunokuqhubela phambili imveliso.
I-X5A-DTH yokumba i-rig ngumsebenzi ozimeleyo ngokupheleleyo we-rig, exhotyiswe ngomatshini osetyenziselwa uxinzelelo oluphezulu lwe-DTH ukubetha isithuthi esine-compressor yomoya, ukubonelela ngenkwali ye-BEIFANG ngumatshini o-2 oqhelekileyo, kuba kukho imingxunya ethambekileyo, ngenxa yoko kufuneka uyilo olukhethekileyo lwerabha isiciko sothuli, nangenxa yelitye elilukhuni, drill ifuna Useto oluthile lweparameter.
Umzekelo, ubume bejiyali yekwari ifuna ukukhethwa kwesantya esincinci ngamazinyo ekholamu okanye umxube wamazinyo ekholamu kunye namazinyo entwasahlobo. Isitshixo sokumba sijikeleza phakathi kwe-70 kunye ne-80 inguquko ngomzuzu, kunye nokuqhekeka kwamatye okungabonakali apha ngezantsi umphezulu unokubangela ukuba imingxunya isilele ukubumba, okanye umtya wokugrumba uyabambeka emngxunyeni, okanye uxinzelelo luwe.
Ngokwendlela yokusebenza kwemveliso, kwimingxunya engama-22 eemitha ubunzulu, ixesha lokugrumba lincitshisiwe ukusuka kumngxunya omnye nge-45min ukuya kwi-avareji yomngxuma omnye nge-30min.